နှစ်ဦးကိုအရောင်ရော်ဘာဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောဆေးထိုးတန်ဆာစက် - တရုတ်နှစ်ဦးအရောင်ရော်ဘာဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောဆေးထိုးတန်ဆာစက်ပေးသွင်း,စက်ရုံ -LARY
ကြှနျုပျတို့ကို Call: 0086-0574-88133587-801 / 0086-13958255267 ကြှနျုပျတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့: [email protected]
3: D ဖိနပ်နောက်ဆုံးစကင်နာ
3: D ဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောဒီဇိုင်းကို software ကို
ရော်ဘာ Injection ကိုမှိုစက်
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » ရော်ဘာတစ်ဦးတည်းသောဆေးထိုးတန်ဆာစက်
N ကိုo. အလုပ်အဖွဲ့စခန်းများ၏
မက်စ် Injection ကို Volume ကို
1000ဌ / စင်တီမီတာ³
FOB port ကို
Ningbo port ကို,ရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်းကို
L ကို A / C, T / T
High Quality လိုအပ်ချက်များပွညျ့မီ
ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်, အဆိုပါဖိနပ်ဘဝါးယူနီဖောင်းသိပ်သည်းဆနှင့်အထူရပါလိမ့်မယ်, နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးတက်အောင်
soft ဆေးထိုးသည့်သေဆုံးဘဝတိုးချဲ့, ရော်ဘာပစ္စည်းဆေးထိုးအများစုမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သော, နှင့်အခြားပစ္စည်းများရောမွှေလို့ရပါတယ်.
ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်အတူကြိုတင်ပုံစံ INSERT အသုံးပွုသောအခါ, တစ်ခုတည်းအရောင်ဆေးထိုးစက်ဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ် ထက်ပိုပြီး 95% အရောင်ရောစပ်၏. အရည်အသွေးအလိုအပ်ချက်များကိုမြင့်မားစံချိန်စံညွှန်းကိုရရှိရန်အတွက်. ငါတို့သည်မြင့်မားသောရှုပ်ထွေးအရောင်ရောနှောထုတ်လုပ်နိုင်သည်နှင့်အတူသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဆအရောင်ဆေးထိုးစက်အားဖြင့်ပေါင်းစပ်ကြိုတင်ပုံစံ INSERT အသုံးပွုသောအခါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးထိုးတန်ဆာစက်အလွန်အမင်းထုတ်လုပ်မှု automated ဖြစ်ပါတယ်, ရိုးရာ vulcanizing စက်၏ငွီးငှေ့ဖှယျကိုယ်တိုင်စစ်ဆင်ရေးကိုဖယ်ရှား, အရည်အသွေးမြင့်၏လိုက်စား, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, လျင်မြန်သောထုတ်လုပ်မှု၏ဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံရန်, ဒါကြောင့်နည်းပညာသစ်သုံးစွဲဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်, Lary ရော်ဘာဘဝါးဆေးထိုးစက်တွေသုံးပြီး !
THE အကောငျးဆုံးရှူးဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသော CREATE ငှါရှာကြံ
LARY ဆေးထိုးစက်မှတဆင့်, ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများသုံးစွဲဖို့တတ်နိုင်လိမ့်မည်, အရောင်, ပုံစံ, ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံဒီဇိုင်းအရသိရသည်မြင့်မားသောအခက်အခဲများထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်, ဖန်တီးရန် အသီးအသီး အားလုံး ၏ ဘဝါး အရာ အရည်အသွေးမြင့်၏တင်းကြပ်စွာလိုအပ်ချက်များကိုဖျောပွနိုငျ, ၎င်း၏ထူးခြားသောကျက်သရေပေးခြင်း.
ပိုပြီး flash ကိုစွန့်ပစ်မှုကိုလျှော့ချ
ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုချင်းစီကိုဆေးထိုးရိုက်ချက်များ၏စွန့်ပစ်ရော်ဘာလျှော့ချဖို့ကြိုးစား, ကန့်လျှင်ပင် ရုံ 1 ဂရမ် !
ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီသံသရာ၏တင်နိုင်အချိန်ကိုအတိုကောက်ဖို့ကြိုးစား, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပင်လျှင် 1 ဒုတိယ !
မြင့်မားတဲ့စံနှုန်း control system
ရိုးရှင်းသောလူကိုစက် interface ကိုနှင့်အတူ, သငျသညျကြိုတင်တင်နိုင်အချိန်သတ်မှတ်နိုင်သည်,ကုသအချိန်, ဆေးထိုးအသံအတိုးအကျယ်, preheating အပူချိန်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တင်နိုင်အပူချိန်, degassing အချိန်, မည်သည့်အချိန်တွင်မနှင့်အခြား parameters တွေကို.
ရောဂါ system ကိုအပြစ်တင်, တစ်ဦးတိုဆုံးအချိန်အတွက်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းမှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပုဂ္ဂိုလ်များကိုလမ်းပြဖို့လွယ်ကူ.
ဒီနည်းကို IS LARY
Ningbo Lary စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနည်းပညာ Co. , Ltd မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ oriented နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်, အားဖြင့်သာတည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပေါ်တူဂီ TECNIROLO Engenharia စက်မှုလုပ် SA ကုမ္ပဏီ.
ငါတို့ဌာနချုပ်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးအယူအဆအမွေဆက်ခံ (TECNIROLO) အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည် ထက်ပိုမိုနှစ်ဆယ်နှစ်ပေါင်းဥရောပမှာဖောက်သည်, Lary ကုမ္ပဏီဖိနပ်ပြန့်နှံ့ဖို့ကျူးလွန်ခဲ့သော စက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာနှင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကို. လက်ရှိထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာများကိုအဓိကအားပါဝင်သည်တရုတ်နိုင်ငံသို့ယူဆောင်လာ: LRS165 လူပျိုအရောင်ရော်ဘာ ဘဝါးအထူးဆေးထိုးတန်ဆာစက်, LRS165II ကို Double-အရောင် (2 သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ) အထူးရော်ဘာဘဝါး ဆေးထိုးတန်ဆာစက်,3to6အရေ�သို့င် /2to3ဘူတာပလပ်စတစ်ဆေးထိုးစက် (PVC, TR, TPU…),, 3: D footware ဒီဇိုင်းကို software ကို, စသည်တို့ကို.
တွင် 20 နှစ်ပေါင်းဥရောပစျေးကွက်ဝန်ဆောင်မှုသမိုင်း, အထူးပလပ်စတစ်မှိုနဲ့ဖိနပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအာရုံစိုက်
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုမြင့်မားရာဘာနှင့်ပလပ်စတစ်ဖိနပ်တန်ဆာစက်ပစ္စည်း၏ automated,ဖိနပ် software ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု
3ဥရောပတိုက်တွင်ဖိနပ်နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ဘို့ D ကိုစကင်နာ
လိပ်စာ:& nbspNo.9 Jingu အလယျပိုငျးလမ်း, Yinzhou ခရိုင်, Ningbo မြို့, တရုတ်နိုင်ငံ
သတင်းလွှာ Subscribeကျွန်တော်တို့ရဲ့ newletter ရန်ဝင်ရောက်မည်နှင့် tendollars ကူပွန်ကိုလက်ခံရရှိ
မူပိုင် © 2018 Ningbo Lary စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များနည်းပညာ Co. , Ltd မှ. Worldsou အားဖြင့်ပံ့ပိုးမှု